DEG DEG:- Ciidanka NISA oo goordhaw toogasho ku dilay ninkii guriga ka dhex dagaalamayay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Ciidanka NISA oo goordhaw toogasho ku dilay ninkii guriga ka dhex dagaalamayay
Ciidamada nabad-sugidda qaranka ee NISA ayaa goordhow toogasho ku dilay ninkii labaad oo la sheegay inuu ka mid ahaa seddaxdii nin ee maanta hoobiyeyaasha ka dhex tuuray degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Ninkaan oo markii hore ku cararay guri ku yaalla xaafadda Ceelqalow ee degmada Wadajir ayaa iska caabin kala kulmay ciidanka NISA, waxaana ugu dambeyn suurto-gashay in ninkaasi toogasho lagu dilo.
Ciidanka NISA ayaa sidoo kale soo bad-baadiyay qoyskii deganaa guriga uu ninkaasi ku cararay, waxaana saacadaha soo socdo la filayaa in saxaafadda loo soo bandhigo meydadka labada nin iyo ninka nolosha lagu qabtay.
Sidoo kale, ciidanka NISA ayaa gacanta ku dhigay gaari ay saarnaayeen waxyaabaha qarxa islamarkaana ay wateen seddaxdaasi nin, waxaana wararka ugu dambeeyay ee la helaayo ay sheegayaan in gaarigaasi uu haatan qarxay.
Dhinaca kale, saraakiisha nabad-sugidda iyo sirdoonka Qaranka ee NISA ayaa sheegay in saacadaha soo socdo ay faah faahin dheeraad ah ka bixin doonaan sida ay wax u dhaceen.
Si kastaba ha ahaatee, waa markii ugu horeeysay oo ay ciidanka NISA magaalada Muqdisho ku dhex toogtaan xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-shabaab, xilli ay madaafiic ka dhex tuurayeen qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho.